Botco.ai: Vahaolana momba ny varotra fifampiresahana mifanaraka amin'ny HIPAA | Martech Zone
Ny sehatry ny resaka HIPAA-mifanaraka amin'ny Botco.ai dia mitohy mandroso, manampy ny Marketing Contextual Chat ary ny tabilao fandalinana mandroso.
Marketing amin'ny chat chat ahafahan'ny mpivarotra manomboka resadresaka namboarina miaraka amin'ny vina sy mpanjifa mifototra amin'ny fomba nitsidihany ny tranokalan'ny orinasa na ny fananan'ny haino aman-jery.
ny vaovao tabilao fanadihadiana manome fahitana lalina momba ny fanontaniana sy ny fitondrantenan'ny mpitsidika.
Miaraka amin'ny fampidirana Botco.ai amin'ny mailaka, CRM, ary rafitra marketing hafa, Contextual Chat Marketing dia mitondra ambaratongam-pahaizana manokana amin'ny varotra resaka izay mbola tsy nisy toa azy teo amin'ny sehatry ny indostria.
Inona no dikan'ny HIPAA-Compliant?
HIPAA dia mijoro ho an'ny Ny lalànan'ny fiantohana ara-pahasalamana amerikana sy ny lalàna momba ny fandraisana andraikitra amin'ny 1996, ary mitazona andiam-pitsipika, lalàna ary fizotrany harahin'ny dokotera, hopitaly ary mihatra amin'ny teknolojia ampiasain'izy ireo. Ny HIPAA dia manampy amin'ny fiantohana fa ny rakitsoratra ara-pitsaboana rehetra, ny faktioran'ny dokotera ary ny kaontin'ny marary dia mifanaraka amin'ny fenitra mifanaraka amin'izany momba ny antontan-taratasy, ny fikirakirana ary ny fiainana manokana. Ireo haitao mifanaraka amin'ny HIPAA dia manana fiarovana ara-teknika, ara-batana ary ara-pitantanana mba hiantohana ny angon-drakitra voatokana ho tsy miankina, tsy azon'ireo manana alalana ihany, voamarina, voatazona araka ny tokony ho izy ny loges fidirana, voaofana tsara ny mpiasa ary manaraka ny fizotrany raha sendra misy lesoka. ny fampahalalana momba ny fahasalamany manokana.
HIPAA Journal - Lisitry ny fanarahana fanarahana HIPAA
Botco.ai vokatra dia ahitana:
Web Chat - ampio tsy misy fotony ny tranonkalanao misy ny tranokala misy anao hahafahan'ny mpampiasa mametraka fanontaniana, fanendrena boky ary hahafantatra bebe kokoa momba ny serivisinao. Fanampin'izay, tsy mila mpiasa mivantana ianao 24/7 handaminana fanontaniana! Ny teknolojika anay dia mamaly azy ireo ho anao amin'ny fomba mifampiresaka sy mandanjalanja.
Facebook Messenger - ampidiro ao amin'ny kaonty fandraharahana Facebook misy anao ny Botco.ai, avelao ny mpanatrika hametraka fanontaniana sy handray valiny ao anatin'ny segondra.
Botco.ai Marketing amin'ny chat chat
Ny fisehon'ny Botco.ai Marketing Contextual Chat Marketing dia manara-maso ny loharanon'ny mpitsidika ny tranokalan'ny orinasa iray, pejy Facebook, na fananana haino aman-jery hafa, na avy amin'ny doka misy karama, fampielezana mailaka na loharanom-pifamoivoizana hafa. Ny fampiasa avy eo dia ahafahan'ny Botco.ai manamboatra resadresaka ifanaovana amin'ireo mpitsidika miorina amin'ireo loharanom-pahalalana ireo
ohatra: ny doka izay mandrisika ny mpampiasa hamandrika fotoana dia hanomboka resaka momba ny fotoana sy toerana mety indrindra handaminana azy io, raha ny fampielezan-kevitra hampiroboroboana ny vokatra manokana dia hanome ny atiny momba ny endrika sy tombony azo avy amin'izany vokatra izany, manome traikefa tena voafantina na manokana.
Amin'ny alàlan'ny fanamboarana ny fifanakalozan-kevitra mifototra amin'ny loharanom-pahalalana, ny mpivarotra dia afaka nampitombo ny vokatra azo notratrarina sy ny taham-panovana narahana fanandramana A / B hatramin'ny 103 isan-jato.
Ny dashboard analytics dia manome ny fahitana feno ny mpivarotra amin'ny traikefa amin'ny chat amin'ny alàlan'ny famantarana ireo fanontaniana miverimberina, manome ny heviny momba ny tanjon'ny mpampiasa vaovao, ary ny famakafakana ny fahombiazan'ny chat cornel. Ny dashboard dia manaparitaka ny fikorianany tsirairay mankany amin'ny tanjona voafaritra tsara mba hahafahan'ny mpivarotra manombana ny dian'ny mpitsidika tsirairay.
Ireo mpivarotra dia mahazo antsipirihany be pitsiny izay ahafahan'izy ireo mamakafaka sy mamantatra ny tahan'ny fihenan'ny isaky ny fantsona mahomby ary manatsara ny kopia, ny fikorianana ary ny dingana mankany amin'ny fiovam-po. Ireo fomba fijery ireo dia manampy ny orinasa handray fanapahan-kevitra tsara, vokatra tsara, marketing ary serivisy ho an'ny mpanjifa.
Botco.ai koa dia mampifandray amin'ny CRM an'ny orinasa, mailaka ary rafitra marketing hafa amin'ny alàlan'ny API mivantana hahafahany mifampiresaka amin'ireo mpitsidika mifototra amin'ny fifandraisan'izy ireo taloha tamin'ny orinasa iray, ao anatin'izany ny tantaran'ny fividianana, ny halavan'ny fifandraisan'izy ireo, ny maha-mpikambana azy, ary maro hafa. Ny fampifangaroana angona avy manerana ny dian'ny mpanjifa dia ahafahan'ny Botco.ai manolotra traikefa manankarena sy manokana kokoa noho ny chatbots nentim-paharazana rehefa mandamina ny fizotran'ny fahaiza-manao sy ny varotra.
Ny mpikarakara fikarakarana ara-pahasalamana, ohatra, dia afaka mitazona dinika manokana mifototra amin'ny tantaram-pitsaboana iray, raha manome toky azy ireo fa ny fampahalalana zarain'izy ireo mandritra ny traikefa amin'ny chat dia tena tsiambaratelo ary mifanaraka amin'ny HIPAA. Botco.ai's Contextual chat dia mampiasa fomba fiarovana azo antoka momba ny fiainana manokana izay tsy miankina amin'ny mpampahafantatra anao manokana, mifanaraka amin'ny GDPR, CCPA, HIPAA, ary ny lalàna mifehy ny tsiambaratelo mifandraika amin'izany.
Manomàna antso miaraka amin'ny Botco.ai
Tags: BotBotco.aihiresakabot miresakafanarahan-dalànakarakara ara-pahasalamanaHIPAAhipaa-compliantresaka amin'ny tranonkala